Ọ nweghị ihe ọ bụla: Ala ọma jijiji siri ike na -emetụta Gris, Saịprọs na Turkey
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Greece » Ọ nweghị ihe ọ bụla: Ala ọma jijiji siri ike na -emetụta Gris, Saịprọs na Turkey
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Saịprọs • Akụkọ Na -agbasa n'Ijipt • Akụkọ na -agbasa na Greece • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Turkey na -agbasa News
Ọ nweghị ihe ọ bụla: Ala ọma jijiji siri ike na -emetụta Gris, Saịprọs na Turkey.
Ala ọma jijiji abụọ siri ike mebiri Crete n'izu ndị na -adịbeghị anya, na -egbu otu onye ma mebie ụlọ. Otu onye Gris seismologist kwuru na ala ọma jijiji ahụ sitere na ụta dị iche iche n'Africa na enweghị atụmanya ala ọma jijiji.
Site na nyocha ala ala United States, a tụrụ ịdị ukwuu ya na 6 na omimi na 37.8km (kilomita 23.5).
Onye na -ahụ maka njikwa ọdachi nke Turkey, Afad, kọrọ akụkọ ebe ntụpọ ahụ dị na 155km site n'ụsọ oké osimiri Turkey.
Ala ọma jijiji ahụ na mbido mbụ ruru 6 ruru ihe dị ka 155km (kilomita 96) site na Kas, mpaghara Antalya.
Ala ọma jijiji siri ike 6 dakwasịrị obodo dị iche iche n'ọtụtụ mba na mpaghara ọwụwa anyanwụ Mediterenian n'abalị a.
Ala ọma jijiji ahụ emeela ọtụtụ agwaetiti dị na Gris na mpaghara ndị ọzọ dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ Mediterenian, gụnyere mpaghara Antalya ndịda na Turkey yana obodo ndị dị na Egypt.
A na -enwe mmetụta nke ọma na agwaetiti Karpathos, Crete, Santorini na Rhodes na Gris na Mọnde.
Ala ọma jijiji ahụ mekwara isi obodo Saịprọs Nicosia, Beirut na Lebanon, Cairo na obodo ndị ọzọ dị na Egypt, akụkụ nke Israel na ógbè Palestine, na mpaghara gburugburu Antalya nke ndịda Turkey.
Afad kwuru na ala ọma jijiji ahụ nke nwere nnukwu mbido 6 mere ihe dị ka 155km (kilomita 96) site na obodo Kas, na mpaghara Antalya.
Gọvanọ mpaghara Kas, Saban Arda Yazici, kwuru na ndị ọchịchị enwetabeghị akụkọ gbasara mmebi ma ọ bụ mmerụ ahụ na Kas ma ọ bụ gburugburu ya.
N'izu gara aga, oke ala ọma jijiji 6.3 dị nso na Crete tụrụ ndị mmadụ ụjọ. Enwere mmetụta ya n'ebe dị anya dị ka isi obodo Gris, Atens, ihe dị ka 400km (kilomita 249).
Izu atọ gara aga, otu oke ala ọma jijiji nke mere na Krit gburu otu onye.
Ka ọ dị ugbu a, Turkey na -anọdụ n'elu nnukwu nsogbu na ala ọma jijiji na -emekarị. Dịkarịa ala, mmadụ 17,000 nwụrụ na oke ala ọma jijiji na northwest Turkey na 1999.